(၁၈)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာလှေလှော်အဖွဲ့ ဆုတံဆိပ်ရရှိရန် နိုင်ငံသုံးန - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မေ ၉- (၁၈)ကြိမ်မြောက် အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာလှေလှော်အဖွဲ့ ဆုတံဆိပ်ရရှိရန် အိမ်ရှင်အပါအဝင် တရုတ်၊ ထိုင်းတို့နှင့် အဓိကယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
(၁၈)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင် ပွဲကို ၂ဝ၁၈ သြဂုတ်၁၈ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၂ရက်အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့ နှင့် ပလန်ဘန်မြို့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက မီတာ ၂ဝဝ အမျိုးသား ၁ဝ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ မီတာ ၅ဝဝ အမျိုး သား ၁ဝ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ မီတာ၁ဝဝဝ အမျိုးသား ၁ဝ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ မီတာ ၂ဝဝ အမျိုးသမီး ၁ဝ တက်လှေလှော်ပြိုင်ပွဲ၊ မီတာ ၅ဝဝ အမျိုးသမီး ၁ဝ တက်လှေလှော် ပြိုင်ပွဲတို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
”အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ အဓိကပြိုင် ဘက်တွေက တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါ။ ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားက တာတိုကောင်းမွန် တယ်။ မြန်မာက တာဝေးနဲ့တာလတ်မှာ ကောင်းတယ်။ ဆုတံဆိပ်ရဖို့အတွက် ဒီနိုင်ငံ တွေနဲ့ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာလှေလှော်အသင်းနည်းပြချုပ် ဦးဝင်း ဖေကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာလှေလှော်အဖွဲ့ချုပ်သည် (၁၈)ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီ မေ ၅ ရက်မှ မေ ၈ ရက်အထိ ကျင်း ပခဲ့သည့် ၂ဝ၁၈ အာရှနဂါးလှေလှော်ပြိုင်ပွဲ ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ် ငါးခု၊ ငွေတံဆိပ်နှစ်ခု၊ ကြေးတံဆိပ်တစ်ခု ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရိုးရာ လှေလှော် အဖွဲ့ချုပ်သည် (၁၈)ကြိမ်မြောက် အာရှအား ကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာလှေလှော်အဖွဲ့အောင် မြင်မှုရရှိရန် တရုတ်နိုင်ငံ မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် လှေလှော်ပြိုင်ပွဲများအနက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့ မြန်မာလှေလှော် အဖွဲ့ကို စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
တိုရေးကိုရောင်းချခဲ့ခြင်းက မှားယွင်းနိုင်ကြောင်း ဂွါဒီယိုလာဝန်ခံ ၊ ဒါဘီပြိုင်ဘက်မန်ယူအသ??
အနည်းဆုံး နောက်ထပ်ငါးနှစ် မိုဗစ် ဆက်ကစားမည်ဟု အေးဂျင့် ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသော်လည်း ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရ
ဧရာဝတီတိုင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (ပထမမူကြမ်း) ကို စီမံဝန်ကြီးများနှင့် ?
ရန်ကုန် ပြည်သူ့အိမ်ရာများ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ေ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် စီမံ/ဘဏ္ဍာမှ ဌာနနှစ်ခ